Eto ianao: Home / Drivers / Nova mpandefa Praiminisitra Latest Version vaky
Nova mpandefa Praiminisitra Latest Version vaky
Nova Launcher Prime is designed for the customization aspects of your desktop screen, lahatahiry sy ny sary masina, ary ianareo ho avo-kilasy kalitaon'ny sary. Ny ara kely ny biraonao mampiavaka ny pejy tsirairay amin'ny lafiny telo elaborative. Azonao atao ihany koa ny fihetsika ampanjifaina ny fitaovana Android hitsin-dalana, toy ny famoronana sy ny rehetra. Rehefa nozohina, Nova Launcher Prime Crack provides you the customization of icons on different desktops, miampy ihany koa dia afaka mamorona nomaniny ho solon'izay ny filentehany dia, afaka mizara azy ireo fitaovana hafa ve ianao, raha te. Noho izany, dia afaka mizara ny fomba ny finday ny biraonao, na ny tarehiny ny takelaka koa raha mihaja izany.
Izany dia mahafinaritra ny Nova mpandefa endri-javatra izay afaka miresaka Google amin'ny hoe Ok, Google, Henoy, Google na Hey alalan'ny endri-javatra io, ianao dia afaka mikaroka misy mafana teny sy ny Google dia hanome anareo ny vaovao rehetra momba ny fikarohana.
Ianao omena lohahevitra isan-karazany ho an'ny Android fitaovana mba hahatonga ny finday classy fijery izay ihany koa ny manome azy nanasongadina ny lantom-peony loko. Azonao atao ihany koa ny fanaraha-maso loko mahazo misaraka ho an'ny lahatahiry, etikety, vatasarihana levitra, mbola voavaky karatry ny fanisana sy ny fototra ho an'ny fitaovana, miampy ihany koa dia afaka mahazo lohahevitra ho an'ny sary masina.
Izany fampiharana dia afaka manampy anao eo amin'ny sary masina, na gadget Mitady handrapaka ny alalan 'ny Grid sela sy manome anao fanaraha-maso be dia be izany.
Afaka personalize ny vakizoro amin'ny mijidina na marindrano scrolling amin'ny fanao vokatry ampiharina eo amboniny, ary afaka koa manome fitoerana an-trano manerana ny lamba foana ny toerana tena pejy.
Mitranga indrindra ny fotoana rehefa mankafy zavatra be loatra fa tiantsika izany akaiky amintsika mandrakariva ireo. Toy ny mety Tia biraonao, ary te mitovy amin'ny rehetra ny fitaovana na ny findainao na ny takelaka. Noho izany, azonao atao ny biraonao fotsiny nomaniny ho solon'izay fisehon'ny sy ny toerana, ary afaka hamindra azy ireo mora foana ny takelaka.
Mety Aoka dia afaka mamorona maro seranan-tsambon'i sy horonan-taratasy teo anelanelan'ny, ary izany koa dia mamela anao hametraka ny tiana Widget ao amin'ny Dock tahaka 4*1 mpilalao mozika.
Nova mpandefa manana Optimization ambony indrindra fampisehoana izay miasa haingana sy mangina, foana ny zavatra rehetra miray volo, ary mamela anao mampiasa ny finday avo lenta haingana araka ny rantsan afaka paompy.
Afaka swipe, fiantraikany, avo roa heny paompy sy ny maro hafa hiasa haingana araka izay azo atao, ary koa ny mamorona vakizoro sy ny fampirimana ao amin'ny fampiharana vatasarihana. Azonao atao ihany koa ny teo amin'ny fampiharana swipe customization lahatahiry ary manana boky nahatanteraka izany mamafa, manary na angorodao.
Esory aloha ny dikan-Nova mpandefa apk & Tesla mbola voavaky Plugin
Na mametraka ny .apks nomena ao amin'ny tahiry.
Hanomboka Nova mpandefa